Ciidanka Booliska Kenya oo qabtay mid ka mid ah kooxdii afduubatay Xafsa – Radio Daljir
Ciidanka Booliska Kenya oo qabtay mid ka mid ah kooxdii afduubatay Xafsa
Juunyo 20, 2021 4:11 g 0
Wararka ka imanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in Booliiska Kenya ay soo xireen mid ka mid ah raggii ka dambeeyay afduubka gabdhaha Soomaalida dhowaan loogu geystay magaalada Nairobi ee caaismadda Kenya.
Xafsa Maxamed Luqmaan oo booliisku ay shaaciyeen in maanta laga soo helay xaafadda Kayole ayaa la sheegay in la afduubtay toddobaadkan dhexdiisa.
Eedeysanaha oo 24 jir ah ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa burcaddii afduubatay Xafsa, ayaa la soo qabtay booliiska ayaana su’aalo weydiinaya. Booliiska ayaa ku raad jooga raggii kale ee burcadda ka tirsanaa.
Xafsa oo markii ugu dambeysay ku sugneyd dukaankeeda oo dhar lagu iibiyo ayay afduubteen koox burcad ah, kuwaas oo dalbaday Sh5 milyan.
Muuqaal naxdin leh oo laga soo duubay Xafsa ayaa lagu arki karay iyada oo wejigeedu bararan yahay isla markaana qoyskeeda ka bayeysa inay lacagta bixiyaan si ay nafteeda u badbaaddo.
Weli wax war ah lagama hayo gabar kale oo lagu afduubtay Nairobi taasoo lagu magacaabo Xafsa Cabdi.
Dowladdaha Soomaaliya & Itoobiya oo heshiis kala saxiixday